Abiy Ahmed: One of the major demands of Qeerroo is to make Afaan Oromoo federal working language in Ethiopia Kichuu
HomeNewsAbiy Ahmed: One of the major demands of Qeerroo is to make Afaan Oromoo federal working language in Ethiopia
Abiy Ahmed : One of the major demands of Qeerroo is to make Afaan
Oromoo federal working language in Ethiopia.
One of the major demands of Qeerroo is to make Afaan Oromoo federal working language. True or not, the news that the PM has requested AU to adopt Amharic as working language will probably bring back Qeerroo to the street for protests not because we oppose the adoption of Amharic as working language of the AU but we believe the priority for this government should be solving its domestic language issues. It has to make Afaan Oromo federal working language first, and then request AU afterwards.
Dhimma Siidaan HaaylaSillaasee Finfinnee keessatti dhaabbachuu ilaalaallatee Viidiyoolee lamaan kana ilaalaa.
1, Gabaasaa Oduu miidiyaa biyyattii guddicha kan ta’e ETV/EBC fi
2, Haasaa Muummicha Ministeeraa #Dr__Abiy_Ahmed kana ilaalaa.